Nhau - Maitiro ekuvandudza mashandiro edu ekugadzira kuburikidza neCCC machining Center programming
MuCNC chaiyo machining, maitiro ekuvandudza mashandiro ekugadzira kuburikidza neCCC machining centre programing inzira inodiwa yevashandi vekugadzira. Izvo zvinhu zvinokanganisa CNC mashandiro emagetsi anosanganisira maturusi matambudziko, matambudziko emagetsi, maparameter emuchina, nezvimwewo, uye izvi zvinhu zvinokanganisa CNC machine centre programming, nekudaro zvisina kunangana nekukanganisa kwekugadzira
Chekutanga pane zvese, tisati tagadzira muCNC yemuchina wekumisikidza, isu tinofanirwa kunyatsoongorora dhizaini yechigadzirwa, kugadzira nzira yekugadzirisa yechigadzirwa, uye kugadzirira maturusi akakodzera ekushandisa. Pasi pemamiriro ekuona iko iko kwekushaya machining, iyo machining pamusoro inofanira kugadziriswa panguva imwe chete sezvinobvira, kuitira kuti ideredze nguva dzekugadzirisa dzemuchina pamusoro. Inofanira kutariswa kana ichipetwa muCNC machining Center.
1. Mune imwe-nguva yekumisikidza uye kuomerera, iko kugadziriswa kunofanirwa kupedzwa panguva imwechete sezvinobvira, kuti kudzikise nguva yekugadzirisa yeiyo workpiece, kupfupisa nguva yekubatsira uye kudzikisa mutengo wekugadzira;
2. Mukuronga kwepurogiramu, teerera kuhungwaru hwechishandiso chishandiso kudzora nguva yekushandura chishandiso. Iyo nzvimbo inogadziriswa neiyo imwechete chishandiso inofanira kupedzwa kamwechete nguva sezvinobvira, kuitira kudzivirira kutambisa nguva kunokonzerwa nekugara uchishandura chishandiso uye nekuvandudza kugadzirwa kwekuita.
3. Kuti kudzikise kumhanya nguva yemuchina uye nekuvandudza kugadzirwa kwekuita, kutarisisa kunofanirwa kubhadharwa kune musimboti wekutanga kugadzirisa zvikamu zviri padhuze muzvirongwa;
4. Mukuronga, uchifunga nzira yekugadzirisa akawanda emabasa epamberi pamwe, kugadzirisa akawanda ekushandira panguva imwe kunogona kunyatso deredza nguva yekudzima uye kuomerera.
5. Mukuita kwehurongwa, zvinodikanwa kudzivirira kudzokororwa kwemirayiridzo isiriyo uye famba nekukurumidza pasi pekutakura nyika kudzikisa nguva yekumirira.
Kuwedzera kune zviri pamusoro zvinhu zvinokonzereswa neCCC machining Center programming kunyatsoshanda, rationality yechigadzirwa dhizaini yechigadziro inogona kupfupisa zvakanyanya iyo yekubatsira yekugadzirisa nguva. Muchidimbu, pane zvinhu zvakawanda zvinokanganisa mashandiro eCCC. Kuteerera kune ruzivo kunogona zvirokwazvo kuvandudza kugadzirisa kushanda.